အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အစိမ်းရောင်ပဲဟင်းကို fusilli - တရုတ်အော်ဂဲနစ် gluten အခမဲ့အစိမ်းရောင်ပဲဟင်းကို fusilli ပေးသွင်း,စက်ရုံ -Qianna
အော်ဂဲနစ်ပဲပုပ်အစိမ်းရောင်ပဲဟင်းကို fusilli အစိမ်းရောင်ပဲဟင်းနှင့်ရေလုပ်နေပါသည်. ဒါကြောင့်အများအပြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများရှိပါတယ်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများပဲဟင်းနဲ့တူမြင့်မားသောဖိုင်ဘာအစားအစာများစားသုံးခြင်းနှလုံးရောဂါသင့်ရဲ့အန္တရာယ်ကိုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသကြ. ပဲဟင်းလည်းဖောလိတ်နဲ့မဂ္ဂနီဆီယမ်များစွာသောအရင်းအမြစ်များမှာ, နှလုံးကျန်းမာရေးကိုကြီးမားသောမျှဝေသူရာများမှာ. ဖောလိတ်ကသင်၏ homocysteine ​​အဆင့်ဆင့်ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေ, နှလုံးရောဂါများအတွက်လေးနက်သောအန္တရာယ်အချက်. မဂ္ဂနီစီယမ်သွေးစီးဆင်းမှုတိုးတက်ကောင်းမွန်, ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးအောက်စီဂျင်နှင့်အာဟာရ. မဂ္ဂနီဆီယမ်၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်တိုက်ရိုက်နှလုံးရောဂါနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကြ, ဒါကြောင့်ပဲဟင်းမစားပျော်ရွှင်သင်၏နှလုံးစောင့်ရှောက်မည်!
ပဲဟင်းမှာတွေ့ရှိပျော်အစားအသောက်ဖိုင်ဘာချုပ်နှင့်စိတ်တိုအူသိမ်အူမ syndrome ရောဂါနှင့် diverticulosis ကဲ့သို့အခြားအစာခြေမမှန်တားဆီးကူညီပေးသည်.
ဖိုင်ဘာ၏များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုမှထည့်သွင်းခြင်း, ပျော်ဝင်အမျှင်ဓာတ်ထောင်ချောက်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်, အစာခြေနှေးနှင့်သွေးတွင်းသကြားဓာတ်အဆင့်ကိုတည်ငြိမ်. ဤသည်ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူသူတို့အဘို့အထူးသဖြင့်အထောကျအကူဖွစျစနေို, အင်ဆူလင်ကိုခုခံသို့မဟုတ် hypoglycemia.
အားလုံးပဲနဲ့အခွံမာသီးများ, ပဲဟင်းပရိုတိန်း၏တတိယ-အမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုမဆံ့. 26 ပဲဟင်းရဲ့ကယ်လိုရီ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုပရိုတင်းမှစွပ်စွဲကြသည်, သောသူတို့အားသက်သတ်လွတ်စားခြင်းနှင့်သက်သတ်လွတ်ဘို့ပရိုတိန်းတစ်ခုအံ့သြစရာအရင်းအမြစ်စေသည်.
ပဲဟင်းမှန်မှန်တိုးမြှင့်, ယင်း၏ဖိုင်ဘာနှင့်ရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကြောင့်နှောင့်နှေး-ကိုမီးရှို့စွမ်းအင်. ပဲဟင်းလည်းသံကောင်းတစ်ခုအရင်းအမြစ်များမှာ, အရာသင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးအောက်စီဂျင်သယ်ယူပို့ဆောင်နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဇီဝြဖစ်ဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်.
ပဲဟင်းအမျှင်များကဲ့သို့ဤသူအပေါင်းတို့အကျိုးရှိသောအာဟာရများပါဝင်သည်ပေမယ့်, ပရိုတိန်း, သတ္တုဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်, သူတို့ကယ်လိုရီဆဲအနိမ့်ဖြစ်ကြပြီးလုနီးပါးမျှအဆီဆံ့. ချက်ပြုတ်ပဲဟင်းတစ်ခုမှာခွက်ကိုသာခန့်ပါဝင်ပါသည် 230 ကယ်လိုရီ, သို့သော်သင်အပြည့်အဝနဲ့စိတ်ကျေနပ်မှု feeling အရွက်.
ပါဝင်ပစ္စည်းများ: အော်ဂဲနစ် ပဲပုပ် အမှုန့်, ရေ